Abahloli be-Leak - I-Delta Engineering Belgium
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "abahloli be-Leak"
Umhloli owakhiwe ngokuvuza - inhloko eyi-1
Umhloli owakhelwe ngaphakathi kwezomnotho onendawo yokuqhafaza, yakhelwe ngqo ukuhlolwa kwemikhiqizo yepulasitiki.
Iyunithi ingahlanganiswa kumshini okhona noma ingangezwa kulayini okhona.
Ishicilelwe ku Wakhelwe ngaphakathi
Umhloli owakhelwe ngaphakathi ovuthayo onesithombe esibonisa isithombe, senzelwe ngqo ukuhlolwa kwemikhiqizo yepulasitiki.
Umhloli owakhiwe ngokuvuza - amakhanda amaningi
Isifaki esenziwe ukuvuza esakhiwe ngesibonisi sokuqhafaza, senzelwe ngqo ukuhlolwa kwemikhiqizo yepulasitiki - amakhanda ayi-1 kuye kwayi-4.
Umhloli owakhelwe ngaphakathi ovuthayo onesithombe esibonisa isithombe, senzelwe ngqo ukuhlolwa kwemiphongolo yepulasitiki.
NgoLwesine, i-19 May 2016 by Ubunjiniyela beDelta
I-ABCDEF 1 UDK050 UDK055 UDK250 UDK310 UDK35X 2 3 dethole disc bottle discop opt opt ​​opt ​​4 block ivaliwe ukutholwa kokukhetha okokukhetha ukuphuma 5 Ukuhlolwa kwemvume kwe-scrap yokuphuma kokuphuma kokuphuma kwe-6 UV / VSA kuvunyelwe i-vvv 7 test ekuqhubekeni kwe-vvv ye-conveyor vvv
Ishicilelwe ku Ukuwohloka kwengcindezi, Abahloli be-Leak
Umhloli wezomnotho ovuzayo - inhloko eyi-1
Umhloli we-econom 1-leak ovuzayo, oklanyelwe ukuhlolwa kwemikhiqizo yepulasitiki.
Ishicilelwe ku Static
ULwesithathu, 15 Juni 2016 by UCristina Maria Sunea
Umhloli wefreyimu ovuzayo ogcwele - inhloko eyi-1
Umhloli we-Leak onekhanda eli-1. Ngokuyisisekelo i-UDK050 eqashwe ngokuphelele, eyenzelwe ngqo ukuhlolwa kwamabhodlela epulasitiki angenalutho.
Umhloli we-Drum leak - inhloko eyi-1
Umhloli we-Leak onekhanda eli-1, lenzelwe ngokukhethekile ukuhlolwa kwezigubhu ze-L-ring.
NgoLwesibili, 11 Mashi 2014 by Ubunjiniyela beDelta
Umhloli ovuzayo - inhloko eyi-1
Ukusebenza okuthuthukile kwe-1-head leak tester, yakhelwe ngqo ukuhlolwa kwemikhiqizo yepulasitiki.
Umhloli we-Leak - amakhanda amaningi
Umhloli wezomnotho ovuzayo, wenzelwe ukuhlolwa kwemikhiqizo yamapulasitiki - amakhanda angama-1 afinyelela kwayi-4.